မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: September 2010
Views of inside and outside Burma ' Editors-part1 VOA
Posted by Mr Htay Tint at 1:47 PM0comments
Posted by Mr Htay Tint at 7:06 AM0comments
ညွန်ကြားသူ စေခိုင်းလို့သရုပ်ဆောင်ရခဲ့တယ်လို့ဖြေရှင်းသူ
မိဘတွေက မြန်မာပြည်မှာ မရှိနေတာလား
မိဘတွေက သမိုင်းမှန် မပြောရဲ လောက်အောင် ကြောက်ရွံ့ နေရတဲ့ ဘဝမို့ လား ။ အတွေးအခေါ် ဆင်းရဲနေတာလား
မိဘတွေက စစ်အာဏာရှင် (ဝါ) လက်ဝေခံတွေလား
ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က စစ်အာဏာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းကလား
မြန်မာပြည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ ကျော်က ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သူ
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဓာတ်ပုံသတင်း
မြန်မာစစ်အစုိုးရရဲ့ လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဦးက အဲဒီစတိတ်ရှိူးမှာ တက်ရောက်ဖြော်ဖြေမှာဖြစ်လို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ
ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အချို့ ကိုယ်တိုင်က အဲသည်သရုပ်ဆောင်ပါဝင်တဲ့ စတိတ်ရှိူးကို
ဖြစ်မြောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းစီစဉ်ခဲ့တာကြောင့်လည်း အဓိကပါဝင်နေပါတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 12:23 AM0comments
နိူင်ငံခြား ကိုဆေးကုသွားမယ် ။
နိူင်ငံခြား ကိုဆေးပစ္စည်းမှာတယ် ။
နိူင်ငံခြား ကိုလက်နက်မှာတယ် ။
နိူင်ငံခြား ကိုဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းမှာတယ် ။
နိူင်ငံခြား ကိုပညာတော်သင်သွားတယ် ။
နိူင်ငံခြား ကိုအဝတ်အစားမှာတယ် ။
နိူင်ငံခြား အလုပ်သွားလုပ်မယ် ။
နိူင်ငံခြား မှာသီချင်းဆိုပြီး ဒေါ်လာရှာမယ် ။
နိူင်ငံခြား နောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ် အတိုင်း
မြန်မာပြည်ကို တည်ဆောက်ကြဖို့ မမေ့ကြနဲ့ 
မြန်မာတနိူင်ငံလုံး နိူင်ငံခြား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရသည်
မြန်မာပြည်၏ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက်ကြီး ဖြစ်နေပါသည် ။
ကျောင်းမှာ စာကြိုးစားပြီး ပညာတော်အောင်သင်ကြားကြပြီး
စစ်ထဲဝင်သူတွေက ရုရှားနိုင်ငံ မြောက်ကိုရီးယား ပညာတော်သင်
အရပ်ဖက်တက္ကသိုလ်တွေက စက်ာပူ သြစတေးသျှ အဂ်လန်
စသည် စသည် နိူင်ငံခြားကို ဆက်ထွက်ဖို့ လူရွယ်တိုင်း၏ မဟာရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်နေသည် ။
မြန်ာပြည်ကလွဲလျှင် တိုင်းပြည်တိုင်းဟာ နေချင်စရာဖြစ်နေလို့ လား
မြန်မာတွေ ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားမှာ သွားရောက် အလုပ်လုပ် နေထိုင်ကြတဲ့ သတင်းတွေ ဖတ်နေရသည် ။
ဈေးထဲက အမှိုက်ကောက်တဲ့ အဖွားကြီး သမီးလဲ ထိုင်းက အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာတဲ့
နေပြည်တော်က အဖွားကြိုင် သမီးလဲ တရုပ်မှာ ပညာသင်ခဲ့တယ် ။
လယ်ကူလီ မောင်ပွ သားက မလေးရှားမှာ ကူလီထမ်းရင်း မြန်မာပစ္စည်းတွေ ရောင်းတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ်သား ဗိုလ်ကြီးမောင်ရွက ရုရှားမှာ ကျွန်ပညာသင်ရင်း ဘီယာအမြည်း မြန်မာအမဲခြောက်ရောင်းသည် ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ ။
အရှေ့ တောင်အာရှ စပါးကျီ
စပါးတောင်လိုပုံ စားဆီကို ရေချိုးနိူင်တဲ့တိုင်းပြည် ။
သယံဇာတတွေက အခုထိ ရောင်းစားလို့ မကုန်သေးဖူး ။
ပေါများလွန်းလို့ကုဋ္ဌေရှစ်ဆယ် သူဌေးသားအနွယ်တွေ ဖြစ်ပြီး
စကားများ တာက လွဲရင် လက်တွေ့ ကျကျ မတွေးတတ် ဘာမှမလုပ်တတ်လို့ 
လူဆိုး ဒမြတွေ စစ်တပ်ထဲဝင်ပြီး တိုင်းပြည်ကို သိမ်းသွားတာလား ။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်၏ လူ့ အဖွဲ့ အစည်း တည်ဆောက်ထားပုံကိုလည်း လေ့လာပြီး
မြန်မာပြည်ကိုလည်း ပြန်လည် ပြင်ဆင် တည်ဆောက် စေလိုပါသည် ။
နိူင်ငံခြားက တိုင်းပြည်တွေကို မြန်မာတွေ ဘာကြောင့်အထင်ကြီးရ တာလဲ ။
နိူင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့လူထု စုစည်းမှု ခေါင်းဆောင်မှုတွေကို
ဘယ်လို စစ်ဆေးပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်ကြတာလဲ
လူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ နေထိုင်နိုင်တဲ့ ဒေသ ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်
မြန်မာပြည်၏ စစ်သားတိုင်းမှာလည်း တာဝန်ရှိနေသည် ။
. . . . . မိတ်ဆွေ သင့်ကြောင့် တိုင်းပြည်မှာ အာဏာရှင် မဖြစ်ပါစေနဲ့ . . .
အောက်ပါစာအုပ်မှာ တိုးတက်နေပြီဟု မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အထင်ကြီးနေသော
နိုင်ငံများ ကျင့်သုံးသော အခြေခံ ဥပဒေများဖြစ်သည် ။
Posted by Mr Htay Tint at 12:50 AM 1 comments